Invictus စျေး - အွန်လိုင်း INV ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Invictus (INV)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Invictus (INV) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Invictus ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
INV – Invictus
Market ကဦးထုပ်: $15 882.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Invictus တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Invictus များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
InvictusINV သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00438InvictusINV သို့ ယူရိုEUR€0.00368InvictusINV သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00333InvictusINV သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00398InvictusINV သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0393InvictusINV သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0275InvictusINV သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.097InvictusINV သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0163InvictusINV သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00582InvictusINV သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00604InvictusINV သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0979InvictusINV သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0339InvictusINV သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0234InvictusINV သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.328InvictusINV သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.738InvictusINV သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00599InvictusINV သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00654InvictusINV သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.136InvictusINV သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0304InvictusINV သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.462InvictusINV သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩5.18InvictusINV သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.66InvictusINV သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.321InvictusINV သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.121
InvictusINV သို့ BitcoinBTC0.0000004 InvictusINV သို့ EthereumETH0.00001 InvictusINV သို့ LitecoinLTC0.00007 InvictusINV သို့ DigitalCashDASH0.00004 InvictusINV သို့ MoneroXMR0.00005 InvictusINV သို့ NxtNXT0.31 InvictusINV သို့ Ethereum ClassicETC0.000608 InvictusINV သို့ DogecoinDOGE1.22 InvictusINV သို့ ZCashZEC0.00004 InvictusINV သို့ BitsharesBTS0.168 InvictusINV သို့ DigiByteDGB0.16 InvictusINV သို့ RippleXRP0.0142 InvictusINV သို့ BitcoinDarkBTCD0.000147 InvictusINV သို့ PeerCoinPPC0.0154 InvictusINV သို့ CraigsCoinCRAIG1.94 InvictusINV သို့ BitstakeXBS0.182 InvictusINV သို့ PayCoinXPY0.0744 InvictusINV သို့ ProsperCoinPRC0.535 InvictusINV သို့ YbCoinYBC0.000002 InvictusINV သို့ DarkKushDANK1.37 InvictusINV သို့ GiveCoinGIVE9.22 InvictusINV သို့ KoboCoinKOBO0.955 InvictusINV သို့ DarkTokenDT0.00403 InvictusINV သို့ CETUS CoinCETI12.3
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 20:10:02 +0000.